Ukukhiqizwa kabusha Asexual, izici zayo kanye nefomu
ukukhiqizwa kabusha Asexual - it is a kabusha umzimba lapho kungekho iqhaza abanye abantu, futhi udlale kwenzeka uhlobo lakubo uhlukanisa eyodwa noma amangqamuzana ambalwa kusuka umzimba kwabakhulelwe. Kwenye inqubo enjalo ehilelekile umzali ngamunye kuphela. I mitotic okuholela ukuwugcina ngokuphelele original umama cell.
ukukhiqizwa kabusha Asexual ezinzima elula. Lokhu kungenxa yokuthi isakhiwo inhlangano eziphilayo owumphumela futhi elula. Organisms kule modi yokuzalana nokuzala ngokwabo ngokushesha okukhulu. Ngaphansi kwezimo ezikahle, inombolo ngayinye ihora amaseli esinjalo kabili. Le nqubo ungaqhubeka okwesikhathi eside, kuze kuyoba ushintsho okungahleliwe isimiso sezakhi zofuzo, okubizwa ngokuthi wezakhi.
Ngokwemvelo, lokhu kwenzeka ngo-kabusha izitshalo kanye nezilwane owumphumela.
ukukhiqizwa kabusha Asexual eziphilayo
division Simple ebonwe izitshalo unicellular nezilwane, ezifana ciliates, amoebae, futhi abanye ulwelwe. Okokuqala, kuyi-nucleus yengqamuzana lihlukaniswe by mitosis ngesigamu, futhi kwakhiwa ke constriction is, futhi isifanekiso umzali ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili izingane eziphilayo.
Yokuzala asexual kwezilwane ngasinda kuphela kwezinye izinhlobo: izipanji, coelenterates, flatworms, tunicates. La magciwane entsha umuntu etholwe luthela noma ukuqoqwa, bese behlukanisiwe umzali umzimba ingxenye senipheleliswa phambi kwalo lonke. Kwezinye izimo, ikhono ukuthuthukisa e umzimba ngamunye izilwane zihlale zinokudla izitho zomzimba. Qedela Hydra, isibonelo, ingaqala kusukela wokuhamba okuyingxenye ezimbili. Lapho asexual ukukhiqizwa kabusha zezinhlobo okudalwe angasuselwa amaseli amaningi ngokusebenzisa esisodwa noma mitotic ukwahlukana ukunikeza ulwazi olufanayo yofuzo, okusho ifa umzimba iseli umzali.
ukukhiqizwa kabusha Asexual izitshalo
Yande ngale ndlela yokuzala embusweni isitshalo. Kunezindlela eziningana izitshalo kahle okusakazwa nezilimo eziyizigaxa, Bokuhlela, cuttings, ngisho amahlamvu engasetshenziswa ukukhiqiza ezintsha izitho vegetative zalesi sihlahla umzali. Lolu hlobo ukuveza asexual libizwa vegetative, futhi kuba esivela izitshalo ehleleke kakhulu. Isibonelo ukukhiqizwa kabusha enjalo kungaba kubhekwe Intshebe enjalo lapho kwenzeka, isibonelo, i-strawberry.
Sporulation - ukukhiqizwa kabusha asexual, okuyinto eyenzeka ngo-izitshalo eziningi, ezifana ulwelwe, Izinhlobo, wona, isikhunta kwezinye izigaba yentuthuko. Kulokhu, lo mshini esiphelweni amaseli akhethekile ezihilelekile, ngokuvamile imbozwe igobolondo obukhulu, okuyinto uwuvikela imiphumela emibi imvelo: ukushisa, amakhaza, ezomile. Njengoba nje kukhona izimo ezikahle, ezinhlamvu liqhumise igobolondo, iseli iqala ukwehlukana ngokuphindaphindiwe, ngokunikela ngokuphila ukuze umzimba omusha.
Olufufusayo indlela yokuzala umzali uma lowomfanekiso ahlukaniswe endaweni encane umzimba kusuka kamuva yakha umzimba ingane.
Isethi lapho abantu bavela kukhokho oyedwa ngosizo lolu hlobo ukukhiqizwa kabusha eziphilayo abizwa ngokuthi izinto ezifana ncamashí.
ukukhiqizwa kabusha Asexual kabanzi kwezolimo ukuze ukhiqize izitshalo nge iqoqo izimfanelo ukuthi ziwusizo ukuze umuntu aphile. "Intshebe" Long, amahlumela ukusakaza strawberry, izithelo ezihlabayo isithwathwa - cuttings. Ososayensi liphenya izindlela zokukhiqiza kabusha, ukuze ufunde ukuthi wokwengamela nokuphatha ukuthuthukiswa yabo. Cell amasiko oyifunayo ukwaziswa kwezakhi zofuzo ekuqaleni okusakazwa bese kumile babo babedinga lonke isitshalo.
French manicure Shellac - Classic futhi ihlala isikhathi eside
Le filimu "Georgia Rule": nabalingisi, indima kanye ngesakhiwo